Gcwalisa uluhlu lwe SQL Server Iimpazamo zeMFF kunye neengxaki
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Gcwalisa uluhlu lweempazamo
SQL Server Iimpazamo kunye neengxaki
Gcwalisa uluhlu lweempazamo kunye neengxaki kwi SQL Server Iifayile zedatha ye-MDF
Xa usebenzisa iMicrosoft SQL Server Ukuncamathisela okanye ukufikelela kwifayile yedatha yedatha eyonakeleyo ye-MDF, uya kubona imiyalezo yeempazamo eyahlukeneyo, enokudida yona. Ke ngoko, apha siza kuzama ukudwelisa zonke iimpazamo ezinokubakho, zilungiswe ngokwamaxesha aqhubekayo. Kwimpazamo nganye, siza kuchaza uphawu lwayo, sichaze isizathu sayo kwaye sinike iifayile zesampulu kunye nefayile emiselweyo DataNumen SQL Recovery, ukuze ube nokuziqonda ngcono. Apha ngezantsi siza kusebenzisa 'i-xxx.MDF' ukubonisa ukonakala kwakho SQL Server Igama lefayile ledatha ye-MDF.
Ngenxa ye SQL Server okanye imiyalezo yempazamo ye-CHECKDB, zintathu iintlobo zeempazamo eziza kubangela ukusilela:
Iimpazamo zolwabiwo: Siyazi ukuba idatha kwiifayile ze-MDF kunye ne-NDF zabelwe njenge Maphepha. Kwaye kukho amanye amaphepha akhethekileyo asetyenziselwa ulawulo lolwabiwo, ngolu hlobo lulandelayo:
Uhlobo lwekhasi inkcazelo
Iphepha leGAM Gcina ulwazi lwemephu yolwabiwo lwehlabathi (GAM) info.
Ikhasi leSGAM Gcina ulwazi ekwabelwana ngalo ngemephu yolwabiwo lwehlabathi (SGAM).
Iphepha le-IAM Gcina isalathiso semephu yolwabiwo (IAM) ulwazi.
Iphepha lePFS Gcina ulwazi lolwabiwo lwe-PFS.
Ukuba amanye amaphepha olwabelo angentla aneempazamo, okanye idatha elawulwa ngala maphepha olwabelo ayingqinelani nolwazi lolwabiwo, SQL Server okanye i-CHECKDB iya kunika ingxelo iimpazamo zolwabiwo.
Iimpazamo zokungaguquguquki: kuba Maphepha ezisetyenziselwa ukugcina idatha, kubandakanya amaphepha edatha kunye namaphepha esalathiso, ukuba SQL Server okanye i-CHECKDB ifumana nakuphi na ukungangqinelani phakathi komxholo wephepha kunye ne-checksum, emva koko baya kunika ingxelo ukungqinelana kweempazamo.
Zonke ezinye iimpazamo: Kukho ezinye iimpazamo ezingangeni kula macandelo mabini angentla.
xxxx.mdf ayisiyo fayile yedatha ephambili. (IMicrosoft SQL ServerImpazamo: 5171)
Intloko yefayile 'ye-xxxx.mdf' ayisiyiyo ifayile yeedatha esemthethweni. IPropathi ye-FILE SIZE ayichanekanga. （Microsoft SQL ServerImpazamo: 5172）
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo
Ucima ezinye iirekhodi okanye ezinye iitafile kwindawo yogcino ngempazamo.
SQL Server inesixhobo esakhelwe-ngaphakathi esibizwa ngokuba I-DBCC, eye I-CHECKDB kwaye UKUJONGWA iinketho ezinokunceda ukulungisa isiseko sedatha seMDF. Nangona kunjalo, kwiifayile zedatha eyonakeleyo ye-MDB, I-DBCC CHECKDB kwaye UKUJONGWA ziya kusilela.
Iimpazamo zokungaguquguquki ezichazwe yi-CHECKDB:
Umqolo kwi sys.xxx awunawo umqolo wokuthelekisa kwi sys.xxx.
Impazamo yetafile: I-ID yento # #, isalathiso se-ID # # iya kuphinda yakhiwe.
Isalathiso setafile yenkqubo asinakuphinda senziwe.
I-ID yento # #, isalathiso sesazisi # #, isahlulo se-ID # #, isazisi seyunithi # # (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (# #: 560) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo.
Ulwabiwo lweempazamo ezichazwe yi-CHECKDB:
Imephu yokwabiwa kwesalathiso (IAM) Iphepha likhonjiswe kwisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM
Ubungakanani (##: ##) kwindawo yesazisi ID # # iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye IAM isabileyo.
Zonke ezinye iimpazamo ezichazwe yi-CHECKDB:
Ayiphumelelanga: (- #######) Ukwenza umbuzo "DBCC CHECKDB (xxxx) NO NO_INFOMSGS" ayiphumelelanga ngale mpazamo ilandelayo: "xxxx".
Impazamo ye-I / O (iphepha elibi le-ID) ifunyenwe ngexesha lokufundwa kwe-0x ###### kwifayile 'xxxx.mdf'.
Inkqubo ayinakuSebenza ngokwaneleyo kwiDatha ukuze iphinde yakhiwe iLog
Ukulahleka kwedatha xa ulungisa nge-CHECKDB
Ifayile ibonakala ngathi incitshisiwe yindlela yokusebenza.
Ngexesha lokuphinda kwenziwe umsebenzi ongene kwiziko ledatha 'xxxx', kwenzeke impazamo kwi-ID yerekhodi yelog.